Oge bụ ihe dị mkpa maka ịchịkwa ahịhịa n’etiti ọgbụgba nduku, mmechi mmechi - Potatoes News
Site na nduku nduku na ahihia mmechi bụ ọrụ n'aka oge maka ndị na-eto eto. Ọ bụkwa oge ata ah u. Ibute ahihia ahihia na oge ya ma jikọta ya na oru nkpuru di iche n'etiti ihe akuku na ahihia bu isi ihe maka igbo ahihia site na mbido. Oge site na ịkụ ihe na ntopute nwere ike ịbụ izu atọ ma ọ bụ anọ na, site na ntoputa gaa n'usoro mmechi, izu anọ ruo ise.
Nke a bụ ihe kpatara oge ji dị mkpa.
Mahadum Idaho nyocha na-egosi na ọnụọgụ 5% ma ọ bụ karịa US nke 1 ga-efu ma ọ bụrụ na anaghị achịkwa ntutu ehihie na ntutu site na ụbọchị ole na ole mgbe nduku pụtara ruo ụbọchị 22 mgbe e mesịrị (abalị abụọ ntutu isi kwa elekere mita). Ọ bụrụ na naanị 1 kwa m n'usoro mpi niile oge-ogologo, mgbe ahụ ihe dị ka 21% US Nke 1 mkpụrụ na-efu.
Iji usoro njikọta igbo ga-enye akara igbo kacha mma na nduku: ọdịbendị, igwe, kemịkalụ, na ihe ndị dị ndụ maka njikwa ahịhịa, karịa ịdabere na otu usoro igbo ahihia.
E nwere ụzọ dị iche iche maka ịkọwapụta oge-oge ma isiokwu a ga-etinye uche na abụọ. Ha abụọ na-eji ọrụ ịkọ ugbo na-egwu ugwu.
Ọ bụ otu n'ime aha njirimara aha ya bụ Dammer Diker na-ezo aka na-akọ mmiri mgbe ụfọdụ.
Maka ọnọdụ abụọ a, edobere akụrụngwa na-akọpụta ihe n'otu ugwu n'otu oge ahụ.
Fọdụ ndị na-arụ ọrụ na-etinye sprayer na azụ nke akụrụngwa tillage na sprinkler-na-etinye ahịhịa ahịhịa (Nyocha 1).
Agbanyeghị ọnọdụ ọ bụla, ọrụ ịkọ ugwu na-arụ bụ nke ikpeazụ a ga-arụ ruo oge owuwe ihe ubi.
(Ezigbo oge ị ga-eji zi ugwu ga - eweta ozi a na njedebe nke edemede a.)
Ọgụgụ 1. Ọdọ tillage / hilling akụrụngwa na na-enweghị sprayer mmasị; ịkọ “ọdọ mmiri” n'ọhịa.
Gụọ ma soro akara ahịhịa
Tank-agwakọta ahihia na usoro dị iche iche iji rụọ ọrụ iji nweta nchịkwa ahịhịa dị iche iche ma gbochie ma ọ bụ gbuo oge mmepe nke ahịhịa ndị na-eguzogide ọgwụ. Chepụta ahịhịa ahịhịa-mixes iji kwụsị ahịhịa ndị dị na mpaghara enyere. Gbanwee usoro ahịhịa ọgwụ iji mee ihe site n'afọ ruo n'afọ.
Nyocha 2. Dọrọ-apụ tupu ipupụta nduku na ịkọ ugwu site na ndagwurugwu. A na-etinye ahihia ahihia mgbe ugwu ahụ gasịrị. Nke abụọ postemergence ịgba nwere ike ịdị mkpa.
"Dọrọ-apụ" tupu nduku apụta na "ịkọ ihe na-esite n'ugwu" mgbe nduku pụta. A na-etinye ahịhịa ọgwụ na-emechi emechi mgbe ugwu ahụ gasịrị. Nyocha 2.
Dọrọ-apụ nwere harrow ma ọ bụ ihe ndị yiri ya iji "kwatuo" ugwu na-adịchaghị mma nke ewuru na akuku ka mkpụrụ mpempe dị nso. Agbanyela n'ọhịa ahụ, agbanyeghị, belụsọ ma ejiri ihe ọkụkụ na -eme ihe eji arụ ọrụ GPS rụọ ọrụ, njedebe ịzụrụ ugwu na-enweghị ike ime ruo mgbe nduku pụta mgbe enwere ike ịhụ ahịrị.
Dọrọ dọkpụ na ugwu nwere ike ijikwa ahịhịa ndị pụtaworị. Herfọdụ ahịhịa ọgwụ nwere ike tinye ya na arụmọrụ na-emighị emi na-elezi anya ka ọ ghara imebi mkpụrụ osisi ma ọ bụ ome nduku n'akụkụ elu.
Agbanyeghị, dị ka ekwuru, ịkọ ihe mgbe emechara ọgwụ ahịhịa ga-akpaghasị mgbochi ahịhịa.
Irè n'aka herbicide na ngwa mgbe hilling-esite tillage: Chemigation; na-agbakwunye ụfụfụ n'azụ akụrụngwa ahụ ma fesa mmiri na-etinye; Ojiji nke ihe eji eme ihe eji eme ya ka aghagha ya n'ofe ubi nke nwere ugbo ala ma na-echekwa ogba aghara iji nweta nkesa ahihia.
Ọ bụrụ na a ga-eji ahịhịa ọgwụ eme ihe naanị inwe ọrụ ala, mgbe ahụ ngwa kwesịrị ime ozugbo ngwa ngwa ugwu ugwu dị ka o kwere mee.
Nkpuru ahihia nke enwere ike iji maka ihe omuma 1 (ngwa mgbe nduku putara)
Rimsulfuron (Matrix na ndị ọzọ)
Ike njikwa abụọ pụta na ahịhịa ndị na-abụghị nke jikọtara.
Kachasị mma mgbe ahịhịa na-erughị 1 inch ogologo.
Kewaa ngwa ọrụ + postemergence ngwa kwere.
Enwekwara ike itinye ya n'ọrụ preemergence + postemergence.
Metribuzin (otutu aha ahia)
Nwere ike ịchịkwa ata ahịhịa na ahịhịa ndị na-abụghị nke jikọtara.
Kachasị mma mgbe ahịhịa <1 inch inch.
A na-akpọ ngwa ngwa preemergence + postemergence.
A na-ahapụ ngwa ngwa postemergence + postemergence na Idaho, Oregon, na Washington naanị.
(Mara: varietiesfọdụ ụdị nduku enweghị ike ịnabata metribuzin.)
Anaghị achịkwa akara ata.
Nke ukwuu na-agbanwe agbanwe, yabụ ọ bụrụ na etinyere ya na mgbochi-ala kama ị chemụ ọgwụ, ọ ga-etinyerịrị (a na-ahọrọ sprinkler-incorporation) n'otu ụbọchị ahụ.
Pendimethalin (Prowl H2O na ndị ọzọ)
Oge izizi rue oge nke anụ ọhịa isii nke nduku kwere.
Note: Enwere ike itinye ya n'ọrụ na nkwụsịtụ, agbanyeghị, ịkọ ugbo na-esote ga-akpaghasị ahịhịa ahihia na ahịhịa nwere ike ịpụta.
A na-ekwe ka a na-enyocha ọgwụ site na pivot dị n'etiti.
Enwere ike itinye akwụkwọ anamachọihe banyere ngwa gara aga.
Undkè, ngwakọta agwakọta nke s-metolachlor + metribuzin.
Metribuzin na ngwaahịa a nwere ike ijikwa ahihia pụta.
A na-ekwe ka agwakọta tank na metribuzin ọzọ ma ọ bụrụhaala na ọnụọgụ ọnụọgụ na akara ngosi aha.
Metolachlor (Stalwart na ndị ọzọ)
Postemergence ahịhịa na-achịkwa naanị na sethoxydim (Poast ma ọ bụ Poast Plus na ndị ọzọ) na clethodim (Họrọ na ndị ọzọ).
Nyocha 3. Enweghị ịdọrọ. Ugbo ala-mmiri na-akọ mmiri tupu nduku apụta. A na-etinye ahihia ahihia mgbe ugwu ahụ mana ọ ka na-enwe ike na poteto. Ngwa ngwa ahihia ahihia ohuru nwere ike idi nkpa.
Do ọ bụghị kpoo ahihia ahihia, ahihia-ahihia.
Ihe ngosi 2
Enweghị ịdọrọ. Illinglọ ọrụ na-arụ ọrụ mmiri na-akụ mmiri tupu nduku apụta na nke na-esote ngwa ngwa herbicide tupu nduku apụta. Ngwa ngwa ahihia ahihia ohuru nwere ike idi nkpa. (Lee ọgụgụ 3.)
Ugbo-ndina nke na-akọ ugbo na nke a nwere ike ịrụ oge ọ bụla mgbe ị kụrụ ma tupu nduku apụta.
N'agbanyeghi oge, a na-eke "akwa dị ọcha" n'ihi na enwere ike ịchịkwa ahịhịa ndị pụtara na ọrụ a.
Ugbu a, a pụrụ iji ọgwụ mkpuru ahihia nke enwere ike itinye n'ọrụ maka ihe atụ 2 maka ndapụta.
Ngwa herbicide kwesịrị ime ozugbo ugwu ahụ dị ka o kwere mee ka ọ dị irè.
Tinye ọgwụ ahịhịa ọgwụ niile etinyere ngwa ngwa ngwa ngwa ka enwere ike iji mee ka ahịhịa ọgwụ rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na etinyere ya site na ala, mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri na-agba mmiri ga-emerịrị maka nnabata na mbido na elu nke anụ ọhịa nke abụọ nke anụ ọhịa ebe ọtụtụ ahịhịa na-eto.
Ihe nlere anya nke Outlook + Linex etinyere na nke a bu nke egosiri na onu ogugu 4.
Preemergence-naanị ahịhịa ọgwụ maka ihe atụ 2
Ọgụgụ 4. Dị ka a kọwara maka Ọnọdụ 2, njikwa ahihia mgbe arụchara ọrụ ugwu na ngwa ntinye oge nke Outlook + Linex (nke etinyere ala na sprinkler n'ime 24 awa nke ngwa).
Ekwesịrị itinye Chateau n'ọrụ dị ka o kwere mee mgbe ọ kụrụ n'ihi na ọ dịkarịa ala sentimita 2 nke ala a kwụsiri ike na-ekpuchi nduku na-etolite na ntinye (na ntinye aha) oge achọrọ.
Maka ojiji na nduku toro na efe n'elu ogbugba mmiri n'ubi naanị. Naanị maka ojiji na Idaho, Washington na Oregon nwere mkpa Mpaghara Pụrụ Iche 24 (c). Lelee steeti gị maka aha na akara ụbọchị njedebe.
Trifluralin (Treflan na ndị ọzọ)
Linuron (Linex ma ọ bụ Lorox na aha ahia ndị ọzọ)
Linex nwere ụfọdụ ọrụ na ahịhịa ndị pụtapụtara, agbanyeghị, a ga-etinyerịrị tupu ipupụta nduku iji zere mmerụ ahụ.
Maka Linex na poteto tolitere na ọdịda anyanwụ nke Ugwu Rocky: Idaho, Washington na Oregon nwere mkpịsị Mpaghara Pụrụ Iche 24 (c). Lelee steeti gị maka ụbọchị njedebe aha na njedebe ndị ọzọ.
Sulfentrazone (Willowood Sulfentrazone 4SC na ndị ọzọ)
ịkpachara anya: Nnukwu mkpanaka na ala nwere pH nke 7.5 ma ọ bụ karịa na / ma ọ bụ mmiri mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri alkaline dị ukwuu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ala esighi ike, nwere ike ịba ụba nke ahịhịa ahịhịa dị na ngwọta ala - ọ dị mma maka njikwa ahihia. nnweta nwere ike ibute mmerụ ihe ubi. Jiri ọnụ ala kachasị dị ala maka ederede ala gị na pH.
Ngwakọta mbu nke sulfentrazone na metribuzin (Willowood MTZ 4SC)
Applicationdi ngwa herbicide akwụkwọ na-esote nwere ike ịdị mkpa
Ihe atụ 1 nwere ike ịchọ ngwa eji akwụkwọ ahịhịa na-egbu ahịhịa nke abụọ. Ihe atụ 2 nwere ike ịchọ ngwa ngwa ahịhịa akwụkwọ na mgbakwunye na ngwa ahụ n'ihi nrụgide ahịhịa dị arọ, ahịhịa na-egbu oge, na / ma ọ bụ ngwa mbụ enweghị ọrụ ụfọdụ ụdị ahịhịa.
Onyonyo 5. etinyere Metribuzin na postemergence na ahịhịa na nduku dị ka akọwara maka Ọnọdụ 1, mana ụfọdụ ahịhịa ndị ahụ buru oke ibu na oge itinye n'ọrụ. Na mgbakwunye, metribuzin adịghị arụ ọrụ na ntutu ntutu abalị.
A na-ejikarị matrix na / ma ọ bụ metribuzin na nke a ebe ọ bụ na enwere ike itinye ha n'ọrụ na poteto ma nwee ọrụ na ahịhịa ndị pụtara.
Oge maka oge igbo na ahịhịa ahịhịa dị oke mkpa. Ihe nlere nke metribuzin tinyechara aka na eserese 5.
Burndown ahịhịa maka ahịhịa atapụtara ahịhịa tupu pupụta nduku na tupu ma ọ bụ mgbe ịdọrọ na / ma ọ bụ ịkọ ahịhịa mmiri?
A na-akpọ Glyphosate, paraquat, na / ma ọ bụ carfentrazone (Aim) na poteto.
Nwee naanị ọrụ foliar naanị (enweghị ọrụ ala fọdụrụ).
Ekwesiri itinye ya tupu poteto apụta (ọbụlagodi tupu ịgbawa).
Nghachaa mgbe etinyechara ya dị mma, agbanyeghị, oge kwesịrị ekwesị maka ahịhịa ọgwụ na-arụ ọrụ ga-emerịrị tupu ịkọ ala ahụ.
Oge kwesiri ugwu ugwu ijikwa ahihia
Mahadum University nke Idaho egosila na mgbe ahịhịa ndị mmadụ na-ebelata na asọmpi nduku dị iche iche toro, na-akọ ihe mgbe obere ahịhịa dị obere na osisi nduku bụ 4 na 6 sentimita asatọ ogologo nwere ike inye njikwa ahihia akụ na ụba.
Otú ọ dị, poteto ugwu nke buru ibu karịa sentimita asatọ ruo 8 nwere ike ibute mgbọrọgwụ ma belata mkpụrụ osisi na ogo ya.
Ọtụtụ ịkọ ihe nwere ike ibute mkpokọta ala, na-ebelata ikuku na nduku ma na -emepụta clods nke na-emebi poteto n'oge owuwe ihe ubi.
Igha ihe mgbe emechara ọgwụ ahịhịa ga-akpaghasị ihe mgbochi ahịhịa na-ebute ala na-adịghị edozi, ma eleghị anya, mkpụrụ ahịhịa ndị ọzọ.
Vationskọ ihe ubi n’oge kwesịrị ekwesị nwere ike ijikwa mbido izizi, ahịhịa na-eto kwa afọ nke na-agaghị ebu ibu karịa ahịhịa abụọ ma ọ bụ atọ, nke na-abụkarị <1 inch-tall, n’oge a na-akọ ya (ọgụgụ 6 n’okpuru).
Enwere ike wepu ahihia toro ogologo rue 3-inch mgbe ụfọdụ, agbanyeghị, mgbe> 4 nke anụ ọhịa, mgbe ahụ ịkọpụta adịghị arụ ọrụ (Ọgụgụ 4 n'okpuru).
N’agbanyeghi n’agbanyeghi na ahihia buru ibu na-agha ala mgbe a na-akọ ugbo, ha nwere ike ịlanarị ma pụta ọzọ.
Ọ bụrụ na ala dị mmiri mmiri, akụrụ ubi kwesịrị igbu oge ka mkpakọ wee ghara ịpụta na ahịhịa enweghị ike “ịgbanye mkpọrọgwụ” n’ala mmiri ahụ.
O yikarịrị ka a gaghị eji ahịhịa na-achịkwa ahịhịa dị na ahịrị.
Oge bara uru. Nchikota nke oru ugwo nke oma na oru ogwu na agha di nkpa maka oganihu, ahihia oge. Oke igbo. Ikwesiri igbo ahihia oru kwesiri ka emejuputa ya tupu mmechi ahihia nduku. Ikwe ahịhịa ka ọ dịgide ruo izu atọ mgbe pupụtara nduku nwere ike ịkpata ịmị mkpụrụ.
Matriks na metribuzin bụ naanị ahịhịa ahihia nke na-adịghị mma ịpụta na nduku na nwee ahịhịa ndụ n’elu ahịhịa ndị pụtara ọtụtụ.
Ma ọ bụghị ya, naanị Prowl H2O (ma ọ bụ 3.3EC), Eptam, Dual Magnum ma ọ bụ Stalwart nwere ike tinye ya na poteto n'enweghị nsogbu - ha agaghị egbu ahihia pụtara. Undkè, ngwakọta nke metribuzin na s-metolachlor nwekwara ike a ga-etinyere mgbe nduku iputa na nwere ụfọdụ ọrụ na pụta ata ah u.
Mgbapu tupu nduku naanị - Chateau, Linex, Outlook, Sonalan, Sulfentrazone, Treflan na Reflex (ebe akpọrọ maka ojiji).
Akwukwo ahihia ahihia dika "glyphosate", "Aim" ma obu paraquat nwere ike tinye aka na nduku. Chere ogologo oge mgbe ngwa tupu ọ bụla tillage!
Tank-mix / bugharia ahihia na usoro di iche iche nke ime ihe na ichota ihe ndi ozo iji mee ka ahihia di na ubi enyere.
Ọgụgụ 6. KWES HR H HILLING TIMNG: Nha nke ahịhịa ndị puru apị a hụrụ n'etiti etiti ahịrị ahịrị bụ cotyledon na ezigbo akwụkwọ abụọ, ihe na-erughị 1-inch n'ogologo, yabụ ịkọ ihe na ma ọ bụ tupu oge a ga-adịkarị irè n'ịchịkwa ahihia ndị a .
Onyonyo 7. OWU Ugwu abughi mbubreyo. Otutu ahihia nke esere ebe a kariri sentimita 3 n’ogologo na ugwu ugwu agaghị enye njikwa dị irè.
Oge dị mkpa maka igbo igbo n'etiti nduku akuku, mmechi mmechi Site n'aka Pamela JS Hutchinson, Association nke America
Tags: ogwu ogwuakuku ndukuresearchUdo nke IDAHOigbo igbo
USDA na-ekwupụta 'Smart Snacks in School' ụkpụrụ na-edozi ahụ